Guddoomiyaha WADDANI oo xilal kala duwan u magacaabay Xisbigiisa iyo Magacyada Masuuliyiinta loo igmaday | Somalilandpost
Guddoomiyaha WADDANI oo xilal kala duwan u magacaabay Xisbigiisa iyo Magacyada Masuuliyiinta loo igmaday
Hargeysa (SLpost) – Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Mudane Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) ayaa xilal Kala duwan u magacaabay Masuuliyiin uu ku jiro gudoomiye ku xigeenka 2aad ee xisbiga Waddani Md. Saleebaan Ducaale Xaaji Jaamac.
Aniga oo tixraacaya qodobka 30aad farqadiisa 6aad ee Xeerka xisbiga WADDANI, kadib markii aan la tashaday, hoggaanka xisbiga, waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 10-ka June, 2017 go’aamiyey in Mudane: Saleebaan Ducaale Xaaji Jaamac loo magacaabo Guddoomiye-ku-xigeenka 2aad ee Xisbiga Waddani.”
“Ujeedo: Magacaabis Xil
Waxaanu Ilaahay ka baryeynaa inuu ku soo kordhiyo fikrado wax ku ool ah, waayo aragnimadiisa iyo Khibradiisaba.”
Waxaan Ilaahay kaaga baryeynaa inuu ku soo kordhiyo xisbiga WADDANI fikrado wax ku ool ah, waayo aragnimadiisa iyo Khibradiisaba.”
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI “